Qoraagu waxa uu xaq u leeyahay in aanu masuul ka ahayn mawduuca, saxnaanta, dhamaystirka ama tayada macluumaadka la bixiyay. Sheegashada mas'uuliyadda ee ku saabsan waxyeelada ay keento isticmaalka macluumaad kasta oo la bixiyo, oo ay ku jiraan nooc kasta oo macluumaad ah oo aan dhamaystirnayn ama khaldan, sidaas darteed waa la diidi doonaa.
Dhammaan wax-soo-jeedintu maaha kuwo ku xidhan oo aan waajib ahayn. Qaybaha boggaga ama daabacaadda dhammaystiran oo ay ku jiraan dhammaan soo jeedinta iyo macluumaadka waxa laga yaabaa in uu kordhiyo, beddelo ama qayb ka mid ah ama gebi ahaanba uu tirtiro qoraagu iyada oo aan la shaacin.
2. Tilmaanta iyo isku xidhka
Qoraagu mas'uul kama aha wax kasta oo ku xiran ama laga soo xigtay boggiisa - ilaa uu aqoon buuxda u leeyahay waxyaabaha sharci darrada ah oo awood u yeelan lahaa inuu ka ilaaliyo booqdayaasha boggiisa inay daawato boggagaas. Haddii waxyeello kasta ay ku dhacdo isticmaalka macluumaadka halkaas lagu soo bandhigay, kaliya qoraaga boggaga la kala leeyahay ayaa masuul ka noqon kara, ma aha kan ku xidhay boggagan. Intaa waxaa dheer qoraaga mas'uul kama aha wax soo dhejis ah ama farriimaha ay daabacaan isticmaalayaasha looxyada doodaha, buugta martida ama liisaska boostada ee lagu bixiyo boggiisa.
3. Xuquuqda daabacaada
Qoraagu waxa uu damacsanaa in aanu u isticmaalin wax kasta oo xuquuqda daabacaada u leh daabacaadda ama, haddii aanay suurtogal ahayn, si uu u muujiyo xuquuqda daabacaada ee shayga la kala leeyahay. Xuquuqda daabacaadda wax kasta oo uu sameeyay qoraagu way xafidan tahay. Wax nuqul ah ama isticmaalka walxaha sida jaantusyada, codadka ama qoraalada daabacaadaha kale ee elegtarooniga ah ama daabacan lama ogola iyada oo aan la ogolaanin qoraaga.
4. Siyaasada gaarka ah
Haddii fursadda gelinta xogta shakhsi ahaaneed ama ganacsiga (cinwaannada iimaylka, magaca, cinwaannada) la bixiyo, gelinta xogtani waxay u dhacdaa si ikhtiyaari ah. Isticmaalka iyo bixinta dhammaan adeegyada la bixiyo waa la oggol yahay - haddii iyo ilaa hadda farsamo ahaan suurtogal ah oo macquul ah - iyada oo aan la cayimin wax xog shakhsi ah ama hoos timaad xogta qarsoodiga ah ama naanaysa. Isticmaalka ciwaannada boostada ee la daabacay, nambarada teleefanka ama faakiska iyo ciwaanada iimaylka ee ujeedooyinka suuqgeynta waa mamnuuc, dambiilayaasha soo dira fariimaha aan la rabin waa la ciqaabi doonaa.
5. ansaxnimada sharci ee afeeftan
Afeeftaan waa in loo arkaa qayb ka mid ah daabacaadda intarneedka ee lagaaga soo gudbiyay. Haddii qaybaha ama shuruudaha gaarka ah ee bayaankan aanay sharci ahayn ama sax ahayn, waxa ku jira ama ansaxnimada qaybaha kale saamayn kuma yeelanayso xaqiiqadan.
Dhammaan su'aalaha ku saabsan nuxurka gaarka ah ee boggan, iyo sidoo kale su'aalaha nooc kasta ha noqotee waa in lagu hagaajiyaa info@withinreachwa.org.